Petroleum Products Regulatory Department
ရေနံထွက်ပစ္စည်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန
About Us မူဝါဒ	လုပ်ငန်းစဉ်	ရည်မှန်းချက်	ဖွဲစည်းပုံ၊ ဌာနခွဲများ	Rules & Regulation	Contact Us
Licenses SOPs Supervision Ticket
Yangon Price List Mandalay Price List	SINGAPORE FOB List Earning List	Price Formula	ASEAN PRICE
Yangon Price List
Mandalay Price List
SINGAPORE FOB List
(500ppm) Diesel - 2047 >< 2150
(50ppm) Premium Diesel - 2075 >< 2178
92 Ron - 2108 >< 2212
95 Ron - 2217 >< 2325
Update Petroleum Prices
Release Date: May 23, 2022 ( Yangon )
(500ppm) Diesel 1918.450000% 42 2047 2150 2098.50 4896.43%
(50ppm) Premium Diesel 1924.860000% 45.63 2075 2178 2126.50 4560.31%
92 Ron 1969.550000% 45.63 2108 2212 2160 4633.73%
95 Ron 2074.880000% 45.63 2217 2325 2271 4876.99%
Release Date: May 06, 2022 ( Mandalay )
92 Ron0002115 2115 2115
95 Ron0002175 2175 2175
(500ppm) Diesel0002450 2450 2450
(50ppm) Premium Diesel0002475 2475 2475
စက်သုံးဆီတင်သွင်းသိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့အတွက် ရည်ညွှန်းလက်ကားဈေးနှုန်းများနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော် ၊ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်မြို့တော်များအတ� [. . .]
စက်သုံးဆီတင်သွင်းသိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့အတွက် ရည်ညွှန်းလက်ကားဈေးနှုန်းများနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော် ၊ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်မြို့တော်များအတ [. . .]
95 MOGAS : 157.05
92 MOGAS : 148.87
GASOIL(500ppm) : 146.02
GASOIL (10ppm) : 146.02
1 US$ = 1853 MMK
Zayyahtarni, Naypyidaw, Myanmar, Yangon.
067 341 1282
Petroleum Products Regulatory Department.